Yasekwa ngo-2008, thina ngu-Huachuang ngumenzi oqeqeshiweyo ojolise kuphela kuyilo, uphando kunye nophuhliso, ukuvelisa kunye nokuthengisa nge-USB-C HUB. Ukusukela kusuku lokuqala lokusekwa, sanikezela ngokubaluleka kumgangatho nokhuseleko. Njengoko ISO 9001-Umzi mveliso oqinisekisiweyo, iimveliso zethu zihambelana nemigangatho yehlabathi enje ngeEC, FCC, ROI-HS,Ukufika kunye neCCC. Ngaphezu koko, sihlala sinikela ingqalelo enkulu kubugcisa bezinto ezintshaZonke izinto zenziwe kwaye zenziwa kuthi, Uninzi lwazo lunelungelo elilodwa lomenzi e-China, ezinye zazo zinelungelo elilodwa lomenzi eYurophu nase-US nazo.
Ngenxa yesakhono esomeleleyo sophuhliso, amandla okwenza imveliso eyaneleyo kunye nomgaqo-nkqubo ongqongileyo, iimveliso zethu ziye zafumana iwonga lehlabathi jikelele yoyilo oluhle kunye nokusebenza ngokugqibeleleyo. Zisetyenziswa kwimimandla yangaphakathi kumazwe anjengeMelika, iFinland, i-UAE, iCanada, iSwitzerland, iNetherlands, iJamani, i-HK, i-UK, i-France ne-Spain. Sibonelela ngeemveliso ze-OEM kunye ne-ODM kwiinkampani ezidumileyo kwihlabathi liphela zi-Home, Vivanco, Kobian, Nyusa, Vertex, Macher, Strax, no Gerth Gmbh.
Zonke izinto ziyilwe kuthi, uninzi lwazo lunama -patpat China e-China, ezinye zazo zinelungelo elilodwa lomenzi eYurophu nase-USA.
Zonke izinto zihambelana nomgangatho we-CE / FCC / ROHS / REACH, uninzi lwezinto zazo sele zineziqinisekiso.
3. Umsebenzi olungileyo
(iyafana ne-Apple shell, uninzi lwabanikezeli abanokushicilela abayi-120 kodwa bethu ngo-180 'bokushicilela) kunye nezinto ezintle ezithile (umzekelo: onke amazibuko anokulahlwa ngokutyibilikayo).
4. Umgangatho ozinzileyo
uyilo oluhle kakhulu lwesekethe elenza ukuba umgangatho uzinze kakhulu (uninzi lwe-HUB kwintengiso lusekho ngemicimbi eshushu, imiba yokungahambelani, kunye nemicimbi yokuphazamiseka ye-WiFi kodwa iimveliso zethu zisonjululwe kule ngxaki.